Myanmar Celebrity နေ့စဉ်သတင်း၊ အောက်တိုဘာ (၂) ရက် | Celebwebmagazine
Myanmar Celebrity နေ့စဉ်သတင်း၊ အောက်တိုဘာ (၂) ရက်
အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း။
1. မိခင် ကွယ်လွန်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကပ်ခဲ့တဲ့ မို့မို့မြင့်အောင်
2. သီချင်း မဆိုရတဲ့ (၂)နှစ် ကာလ ဦးချစ်ကောင်း ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှု
3. တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်
4. မျိုးကိုကိုစန်း ကိုယ်တိုင်ရေး ‘နားလည်မှု Radio’စာအုပ် ထွက်ရှိ
5. ဇာတိမြေမှာ အလှကုန် ပစ္စည်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ နီလန်း
6. မျက်လုံးတု လိုအပ်နေသူများကို ကူညီနေတဲ့ ဝေဠု
@Myanmar Celebrity Update: Daily Update News of Myanmar Celebrities, October 02, 2021. #MyanmarCelebrityNews #မြန်မာအနုပညာသတင်း #MyanmarCelebrityUpdate #MohtMohtMyintAung #EaindraKyawZin #ChitKaung #SoePyaeThazin #MyoKoKoSan #Nilen #WaiLu #မို့မို့မြင့်အောင် #ချစ်ကောင်း #စိုးပြည့်သဇင် #မျိုးကိုကိုစန်း #နီလန်း #ဝေဠု